नेपाल बैंकद्धारा ब्याजमा विशेष छुट ~ Banking Khabar
नेपाल बैंकद्धारा ब्याजमा विशेष छुट
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकले २०७६ चैत मसान्तसम्म लगानी भएका कर्जाहरुको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ । कोरोनाको कारण सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेकाले आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न छुट दिने भएको हो ।
यस्तो छुट त्रैमासिक ब्याज, किस्ता तथा अन्य दैदस्तुर तिर्ने ऋणीको हकमा २०७६ पुस मसान्त तथा मासिक किस्ता, ब्याज तथा अन्य दैदस्तुर तिर्नेहरुको हकमा २०७६ फागुन मसान्तको त्यस्ता रकम तिर्न बाँकी भएका ग्राहकले चौथो त्रैमासभित्र कर्जा नियमित गरेमा समेत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिको ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन् ।
विसं २०७७ वैशाखमा किस्ता तिरिसकेका ग्राहकले पनि यस्तो छुट सुविधा पाउने र सोको हिसाब मिलान बैंकद्धारा गरिनेछ । यस प्रकारको छुट सुविधा प्रदान गर्दा कतिपय ग्राहकले बैंकको आधारदर बराबरकै अर्थात् ७.८२ प्रतिशतकै न्यूनतम ब्याजदर सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
गभर्नरज्यू, मैले आत्महत्या गरेँ भने -बैंकको ऋण तिर्न पर्ला कि नपर्ला ?
गभर्नरज्यू, मैले आत्महत्या गरेँ भने बैंकको ऋण तिर्न पर्ला कि नपर्ला ?
एकैदिन ३३४ जना कोरोना संक्रमित थपिए
विपन्न बर्गसम्म फैलिएको लघुवित्त – बजेटबाट निराश
बैंकिङ निक्षेपमा थप प्रभाव पर्ने अबस्था
बन्दाबन्दीको प्रभाव : बिकेन नागरिक बचतपत्र